मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन के गर्ने होला”? - Samachar Post Dainik
मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन के गर्ने होला”?
म टिना ,१८ बर्ष को भए । केटा हरु देख्दा एक प्रकार्को ईमो आउछ । झन सर्टलेस केटा हरु देखे भने झनै ईमो आउछ । ल स्टोरी तिर जुम्, एक दिन साथी ले उस्को डेड्म्म नहुँदा मलाई घर मा साथी दिनु भनेर बोलाई । म पनि घर्मा भनेर साथीको घर गए ।
साथी र उस्को दाजु रैछ घर मा । दाई चै गोल खेल्नु जानु भको रोइछ । मलाई त्यो दाई एक्दम हेन्ड्सम लाग्छ । साथी दोकान गकी थि भरै पढ्दा निन्द्रालाग्छ भनेर चिप्स
हरु लिनु, म खाना बनाएर बसिराथे दाई आउनु भो । गर्मिले होला भेस्ट खोल्नु भाथियो, म त त्यो देखेर हेरे को हेरै भएछु बडी एक्दम से’क्सी थियो ।
काठमाडौँ- महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ ।
नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य
रुपमा यौ;न स;म्पर्क, वी;र्य स्ख;लन, डिम्ब निषेचन र डि;म्बरोपण जस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
महिलाको डि;म्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डि;म्ब नि;ष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शु;क्रकीटसँग मिलन हुन डि;म्ब निस्किएको
हुनु आवश्यक छ ।डि;म्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा
महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४औं दिनतिर डि;म्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौ;न स;म्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्रजनन अङ्गभित्र शुक्रकीटहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, त्यसैले डि;म्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भधारणका दृष्टिकोणले असुरक्षित काल मानिन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रकाशित मिति ३ माघ २०७७, शनिबार १२:१९